Amalfi Coast: ihe ịhụ | Akụkọ njem
Mariela Carril | | Ebe njegharị, Italia
La Amalfi n'ụsọ oké osimiri Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime pearl ndị njem nlegharị anya kacha mma na Ịtali, mana ọ bụkwa eziokwu na maka njem mbụ ọ nwere ike ịdị oke egwu. Enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ, ịhụta… ebee ka ịmalite? Ogologo oge ole ka ị ga-eji na ya?
Kedu obodo ndị kwesịrị ịga leta? Ogologo oge ole ka ị ga-anọ? Kedu ụzọ kacha mma isi soro? Ya mere, anyị ga-ajụ onwe anyị ọtụtụ ajụjụ. Yabụ, ebumnuche anyị na Actualidad Viajes bụ ime ka ihe dị mfe ma belata ihe niile ka ọ bụrụ ebe dị mfe. Amalfi Coast: ihe ị ga-ahụ.
1 Amalfi n'ụsọ oké osimiri
2 Ihe ị ga-ahụ
Mbụ ị ga-amarakwa na Amalfi n'ụsọ oké osimiri Ọ bụ ụsọ oké osimiri Ịtali dị n'Oké Osimiri TyrenMa ọ bụ, na Ọwara Salerno, na mpaghara Campania mara mma. Obodo niile na-emejupụta mpaghara osimiri a bụ akụkụ nke ndepụta Ebe UNESCO World Heritage Site kemgbe 1997.
Oke osimiri a bụbu akụkụ nke Amalfi Republic, otu n'ime mba ndị ahụ na-enwekarị mmiri mmiri n'otu oge na Italy. Amalfi bụzi isi obodo akụkọ ihe mere eme , ọ bụ ezie na taa ọ bụ obodo enyi, obere na ọmarịcha obodo. Obodo ndị ọzọ na-ewu ewu bụ Ravello na Positano, mana enwere ọbụna karịa: Cetara, Atrani, Furore, Maiori, Minori, Praiano, Conca del Marini, Scala, Tramonti na Vietri sul Mare.
Nke bụ eziokwu bụ na e nwere ọtụtụ ụzọ ga-ekwe omume na ị na-eche mgbe niile banyere ụbọchị ole anyị nwere na ole anyị chọrọ ịmata. Mgbe ee ọ ga-ekwe omume ịmara oke osimiri Amalfi n'otu ụbọchị, Nke bụ eziokwu bụ na ọ ga-enwe ekele karịa na ọtụtụ ụbọchị. Ọ dị mma, n'ime awa 24 mmadụ nwere ike mata ntakịrị nke Amalfi, Ravello na Positano, ebe kachasị ewu ewu, mana ebe dị ebube ka ahapụla.
Yabụ, n'ụkpụrụ ọ ga-adabere na ọdịmma gị, mana ọ bụrụ na otu ụbọchị dị obere mgbe ahụ ezigbo nkezi bụ ụbọchị 3 ịgagharị ebe ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, na ise i kariri mma. Enweghị oge buru ibu? Mgbe ahụ, nhọrọ kacha mma nke ihe niile bụ ịkpọ otu n'ime njegharị ndị a na-enye ozugbo na Rom na nke gụnyere, na mgbakwunye na ụsọ oké osimiri Amalfi, Pompeii.
Ya mere, ihe ọzọ ịmara bụ nke ahụ maka njem ọ bụla n'akụkụ oke osimiri Amalfi nwere ike ịmalite site na etiti etiti, dịka ọmụmaatụ Sorrento. Na ịchịkọta ị nwere ike mgbe niile gbazite ụgbọ ala ma ọ bụ skuuta ma ọ bụ jiri ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụgbọ njem ọha na-agagharị. Ihe niile ga-adaberekwa na oge ị na-aga. Mgbe oge okpomọkụ na njem nlegharị anya juru ebe niile, ụgbọ ala nwere ike iwe iwe na okporo ụzọ nwere ike bụrụ ọgba aghara.
Ka anyị hụ nke mbụ 24 hour njem njem ịmara site na Sorrento, Positano, Amalfi na Ravello. Ị na-amalite na Positano, na osimiri ya zuru oke na obere ụlọ ya na-adabere na ugwu ndị dị n'azụ. Ị nwere ike ịzụta na ụlọ ahịa ha, rie ice cream ... nkwụsị ọzọ ga-abụ Amalfi, obodo ochie na ọmarịcha obodo. Ọ dịbu ibu karị, ma ala ọma jijiji mere na 1343 mere ka ọtụtụ n'ime obodo ahụ mikpuo n'oké osimiri.
N'ebe a na Amalfi, ị kwesịrị itinye uche na ịga leta katidral na nnukwu square, ịma mma, na ịkwụ ụgwọ obere ọnụ ụzọ ị nwere ike ịhụ sarcophagi Roman na cloisters na akụ nke nkà okpukpe. N'agbanyeghị na enwere ndị njem nleta mgbe niile na Amalfi, ebe a mara mma. N'ezie, iji ruo Positano ị ga-agbago ntakịrị wee gaa na ubi mara mma nke Villa Rufolo n'ebe ahụ n'ihi na echiche sitere na ụwa ọzọ.
Ọ dị ka ọtụtụ ihe maka otu ụbọchị? Ee, ee, mana enwere ọtụtụ ndị na-eme naanị akara obodo. Mgbe Ị nwere ike iji ụgbọ mmiri si Sorrento gaa Positano ọ kacha mma iji bọs gaa. N'ọdụ ụgbọ oloko Sorrento ị nwere ike ịzụta tiketi ụbọchị niile iji jiri bọs, ụlọ ọrụ tiketi dị na steepụ ọnụ ụzọ ọdụ ụgbọ mmiri, yabụ ị nwere ike ịgagharị na azụ site na obodo ndị a maka ihe dị ka euro 7. Naanị cheta ịga njem n'isi oge dị elu.
Ugbu a, ịgbaso atụmatụ a, anyị nwere ike ịnye gị ụbọchị nke abụọ Sorrento Ọ bụ ebe mara mma nke ukwuu nwere okporo ámá mara mma nwere obere ụlọ ahịa na cafes. Ị ga-agarịrị na Ụka ​​San Francisco, nke nwere ọmarịcha ụlọ nsọ jikọtara ya na ụlọ nsọ yana ọmarịcha echiche nke Bay of Naples na Vesuvio, yana mkpọmkpọ ebe nke Vallone dei Mulini igwe ihe. Enwekwara Piazza Tasso na okporo ụzọ ịzụ ahịa dị n'akụkụ ya. Eziokwu bụ na Sorrento dị obere na enyi ma ọ gwụla ma ịchọrọ ịma ala ịta ahịhịa, obodo ahụ n'onwe ya mfe kpuchie na ụkwụ.
Ụbọchị nke atọ anyị rutere Capri, otu n'ime ebe ndị ama ama n'ụwa. Capri bụ àgwàetiti mara mma nke oké osimiri turquoise gbara ya gburugburu na-etinye uche na ya setịpụ ụgbọ elu mba ụwa maka… puku afọ? Otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya bụ ihe a na-akpọ Blue Grotto, ọgba dị n'oké osimiri nke mmiri ya na-enweta ụda na-acha anụnụ anụnụ nke miri emi na anyanwụ. A na-eji ụgbọ mmiri erute ya ma ọ bụ otu ụgbọ mmiri ahụ na-eme ka ị gaa njem nlegharị anya n'ụsọ oké osimiri na ọbụna ruo n'ebe a na-amaghị ama Faraglioni nkume.
Na Marina Capri enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ebe ị nwere ike were njem nlegharị anya ndị a, mana ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịde akwụkwọ tupu oge eruo. Ọ bụrụ na ị nwere oge, mgbe ị gachara Capri, ị nwere ike iji ụgbọ ala gaa anacapri, naanị nkeji 10 na maka euro 2 ọ dịghị ihe ọzọ. Ebe i nwere ike ịrị ochelift na rịgoro n'elu Monte Solaro, ebe kasị elu n'àgwàetiti ahụ. Echiche ndị ahụ! Ị nwere ike ịnọ na-eche ma Capri dị oke ọnụ, ee, mana ọ bara uru ịga na ịmara ya, gịnị ka ị chọrọ ka m gwa gị?
Iji ruo Capri site na Sorrento, ị ga-aga Marina Piccolo, nke kachasị ukwuu n'ime ụgbọ mmiri abụọ ahụ, zụta tiketi na voila, njem ahụ bụ nkeji 20 na ọnụahịa dịgasị iche dabere na oge nke ụbọchị. Na mbụ ọ na-adịkarị ọnụ ala. Ozugbo na Capri ị nwere ike debanye aha maka njem nlegharị anya, ma ọ bụrụ na-amasị gị ihe ndị ahụ ahaziri ahazi.
Na 4th ọ bụ ntụgharị nke Pompeii. Eziokwu bụ na ọ bụ ezie na ọ bụghị na ndepụta obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri Amalfi ọ bụ mmehie ịnọ na Naples ma ghara ịga na saịtị akụkọ ihe mere eme a naanị otu n'ime ụwa. Agaghị m ahapụ nke a. Ọ dị ka ịlaghachi azụ n'oge, ọ bụ ihe magburu onwe ya ma na-enye ahụmịhe dị iche na nke obodo Amalfi ebe ntụrụndụ ma ọ bụ mmasị na-agafe ebe ọzọ.
Na filially, na ụbọchị 5 anyị nwere Naples onwe ya. Ọ nwere ike bụrụ aha ọma maka ịdị unyi, adịghị ọcha na enweghị enyi mana ọ bụ obodo Ịtali n'ezie na ọ bara uru nleta ma ọ bụrụ na ịnọ na mpaghara ahụ.
Bụ Museumlọ ihe ochie mgbe ochie, na ihe ndị dị na mkpọmkpọ ebe nke Pompeii na Herculaneum, na ihe si n'Ijipt oge ochie kwa, e nwere Ụka Gesú NuovoSite na ntinye n'efu na ọmarịcha ọla edo na-acha anụnụ anụnụ, ị nwere ike ịga njem na Naples n'okpuru ala ma ọ bụ gaa na Royal Palace of Caserta. Ị nwere ike iji ụgbọ oloko si Sorrento rute Naples ma na-aga azụ ị nwere ike ịgbanwe wee buru ụgbọ mmiri.
N'ikpeazụ, Kedu mgbe ị ga-aga na Amalfi Coast? Mpaghara ahụ nwere ihu igwe Mediterranean yabụ Enwere ike ileta ya n'afọ niile, mana mmiri na ụbịa na-atọ ụtọ karị iji soro ndị mmadụ ole na ole nụ ụtọ echiche ahụ. Mgbe ahụ, buru n'uche na na mgbakwunye na nleta obodo enwere ahụmahụ ndị ọzọ: ịrịgo, ịga ije, na-ekpori ndụ ụfọdụ n'ime 100 osimiri dị na mpaghara ahụ, ịkwọ ụgbọ mmiri, ileta ụlọ ochie na ndị mara mma ... mgbe niile, a na-etinye uche dị ukwuu na ntakịrị ntakịrị. oghere.
Aro: mee nke Ụzọ nke Chi, njem kacha mma n'ụsọ oké osimiri Amalfi, nwere echiche dị egwu. Ụzọ na-aga site na Bomberano ruo Nocelle na ọ na-ewe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa atọ iji rụchaa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita asaa ọ nwere. Ụzọ ahụ na-agafe obodo ochie, mkpọmkpọ ebe na ọmarịcha echiche. Ị na-abịa site na njem ọha, ụgbọ ala SITA, gaa Amalfi, sitekwa n'ebe ahụ ụgbọ ala ọzọ na-aga Bomberano. Atrani bụ ebe ọzọ enwere ike ịga, obere, chiri anya na nke ọma Italian. Ọ bụ naanị ije nkeji iri site na Amalfi ma osimiri ahụ mara mma nke ukwuu na ebe anwụ na anwụ na nche anwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Ebe njegharị » Amalfi Coast: ihe ị ga-ahụ
Obodo kacha mma dị nso na Berlin